स्नातक पास गरेर कम्प्युटर जानेको मान्छेले कुन देश जान पाउँछ र कस्तो काम पाउँछ ?
Thu, Aug 06, 2020 | 16:38:58 NST
प्रश्न – म रोजगारीका लागि विदेश जान चाहन्छु । तर कुन देश जाने भन्नेबारे अन्योलमा छु । मैले विए पास गरेको छु । कम्प्युटरमा अफिस, पेजमेकर र फोटोसप चलाउन जानेको छु । अरु सीप भने छैन । मैले कुन देश गए राम्रो होला ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – उहाँले आफूले जति पनि सीप सिक्नु भएको छ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ।
र लाइसेन्स प्राप्त जुनसुकै संस्थाबाट पनि उहाँ जान सक्नुहुन्छ । उहाँले पढेको पनि हुनुहुन्छ अनि कम्प्युटरमा पनि उहाँको ज्ञान रहेछ । उहाँले अफिसियल तथा सुपरमार्केटहरुमा भित्री काम पाउनुहुन्छ । उहाँको अँग्रेजी भाषा चाँही राम्रो हुनुपर्छ ।